ထားဝယ် – Ministry of Hotels & Tourism Myanmar
ထားဝယ်မြို့သည် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏ မြို့တော်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ တောင်ဘက် ပိုင်းတွင်တည်ရှိပါသည်။ ကမ်းရိုးတန်းဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဧရိယာ ၄၂၆၈.၃ ကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းပါ သည်။ ယခင်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် အရေးပါသည့် ကုန်သွယ်ရေးဆိပ်ကမ်းတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သစ်သားဖြင့် ဆောက်လုပ်သော ကိုလိုနီခေတ်အဆောက်အအုံများ၊ သက်ငယ်အမိုးဖြင့် တစ်ထပ်အိမ် များ၊ အုတ်နှင့်အင်္ဂတေအိမ်များရှိပါသည်။ ထားဝယ်မြို့တွင် ကျွန်းများ၊ ထင်ရှားသောသမိုင်းဝင် ဘုရားများ ရှိပါသည်။
ကြီးမားသော သမိုင်းဆိုင်ရာ၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအမွေအနှစ်များနှင့် သဘာဝကိုဖော်ထုတ်ခြင်း
ထားဝယ်မြို့သည် ပုဂံခေတ် ၁၁ ရာစုလောက်မှ စတင်၍ ရှည်လျားသော သမိုင်းကြောင်း ရှိသည့် မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါသည်။ စူခိုထိုင်းနိုင်ငံတော်၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁၂ ရာစုမှ ၁၅ ရာစုအထိ အယုဒ္ဓယနိုင်ငံတော်မှ သိမ်းပိုက်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ထိုင်းနိုင်ငံ၏လက် အောက်သို့ ကျရောက်ခဲ့ရသော ထားဝယ်မြို့ကို ၁၈၂၄-၁၈၂၆ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှတို့မှ လက်လွှဲယူ သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှတို့၏ စနစ်အရ ထားဝယ်မြို့ကို ‘Tavoy’ ဟုသိထားခဲ့ကြသည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးနောက်ပိုင်းတွင် Tavoy သည် လက်ရှိမွန်ပြည်နယ်၏အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်သော Tenasserim ဒေသ၏ မြို့တော်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၎င်းနောက် ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် Tavoy မှ ထားဝယ်သို့ ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်လာခဲ့ပြီး ပြည်နယ်အမည်သည်လည်း တနင်္သာရီအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲ လာခဲ့သည်။ ယခုအခါတွင် ထားဝယ်မြို့၏ ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများသည် ရှည်လျားစွာ တည်ရှိခဲ့သော သမိုင်းကြောင်း၏ သက်သေအထောက်အထားများအဖြစ် အခိုင်အမာရပ်တည်နေပြီး ခရီးသွားပြည်သူများကို ထားဝယ်မြို့သို့ လာရောက်လည်ပတ်ချင်အောင် ဆွဲဆောင်နေပေတော့သည်။
ထားဝယ်မြို့သည် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏ တင့်တယ်လှပသော စေတီပုထိုးအချို့ တည်ရှိရာ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပေသည်။၎င်းတို့အနက် မြို့၏တောင်ဘက်ရှိ ရှင်မုတ်ထိဘုရား၊ မြောက်ဘက်ရှိ ရှင်ထားဝယ်ဘုရားနှင့် အငူနားရှိ ရှင်မော်ဘုရားတို့သည် ထင်ရှားလှသည်။ ထို့အပြင် ၇၄ မီတာ ရှည်လျားတော်မူသည့် လောကသရဖူလျောင်းတော်မူဘုရားသည် မြို့၏ အထင်ကရ ခရီးသွား ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘုရားစေတီအသီးသီးသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဟန်ဖြင့် အသီးသီး ထင်ရှားကျော်ကြားနေပြီး ဘာသာရေးအရ ကိုးကွယ်ရာနေရာများအဖြစ်သာမက ယဉ်ကျေးမှု သမိုင်း ကြောင်းအရပါ အရေးပါလှသည့် နေရာများလည်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် မောင်းမကန်ကမ်းခြေ အနားရှိ မျှော်ရစ်ဘုရားသည်လည်း ထင်ရှားသော ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါဘုရားသည် ကျွန်း၏အလယ်ဗဟိုတွင် တည်ရှိနေပြီး ကျောက်တုံးများဖြင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ် တည်ဆောက်ထားရာ ခရီးသွားပြည်သူများအနေဖြင့် မဖြစ်မနေ သွားရောက်လည်ပတ်သင့်သည့် နေရာတစ်ခုပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။
ထားဝယ်မြို့၏အံ့သြဖွယ်ရာ ပင်လယ်ကမ်းခြေများနှင့် ကျွန်းများ
ကမ်းခြေမြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ထားဝယ်မြို့သည် အသက်ရှူမှားလောက်အောင် ရင်သပ် ရှူမောဖွယ် လှပသော နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်သည်များအား ဆွဲဆောင်သည့် ထင်ရှားကျော်ကြား သော ပင်လယ်ကမ်းခြေ ပေါများသည့် ခရီးစဉ်ဒေသ ကမ်းခြေမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ထင်ရှား ကျော်ကြား လူသိများသည့် ကမ်းခြေများမှ တစ်ခုဖြစ်သော မောင်းမကန်ကမ်းခြေသည် သန့်ရှင်း လတ်ဆတ်သော လေပြေလေညှင်းလေးများ၊ စိတ်အာရုံကို ကြည်လင်ငြိမ်းအေးစွာ အနားယူ အပန်းဖြေနိုင်သော စိတ်ဖိစီးမှုများမှ အဝေးသို့ ဖြေလျော့ပေးနိုင်သော ရှုခင်းများနှင့် ပြည့်နှက် နေသော ပင်လယ်ကမ်းခြေတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကမ်းခြေတွင် တည်ရှိသည့် များပြားလှစွာသော စားသောက်ဆိုင်ကြီးများနှင့် ကော်ဖီဆိုင်များတွင် ကမ်းခြေသို့ လာရောက်လည်ပတ်ကြသော ခရီးသွားဧည့်သည်များအားလုံးသည် သန့်ရှင်းလတ်ဆတ် ချိုမြိန်လှသော ပင်လယ်စာအစားအသောက် များကို မြိန်ရေယှက်ရေ အားပါးတရ စားသောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ စက်စာအော်ကမ်းခြေ၊ ဖိုးဖိုးကျောက်ကမ်းခြေနှင့် ဆင်ပေါက်ကမ်းခြေများသည် ခရီးသွားဧည့်သည်များ တစ်ခေါက်တစ်ခါ လာရောက်လည်ပတ်ရန် ထိုက်တန်သော သာယာလှပသည့် အခြားသော ကမ်းခြေများဖြစ်ပါသည်။ ထားဝယ်မြို့၏ အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်တွင် ထူးခြားလှပသော လည်ပတ်ဖွယ်ရာ ကျွန်းပေါင်း များစွာ ရှိပါသည်။ ကပ္ပလီပင်လယ်အတွင်းရှိ လောင်လုံဘုတ်ကျွန်းနှင့် ပိန်းဇင်ကျွန်းများသည် ထားဝယ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ခရီးသွားဧည့်သည်များ လာရောက်လည်ပတ်မှု အများဆုံးကျွန်းများ အဖြစ် တည်ရှိနေကြပါသည်။ ခရီးသွားဧည့်သည်များသည် ၎င်းကျွန်းများတွင် ရေငုပ်၍ ရေအောက် အလှအပများအား ကြည့်ရှုခြင်း၊ ငါးမျှား၍ အပန်းဖြေခြင်းနှင့် မော်တော်ဘုတ် များဖြင့် ကျွန်းအနီး တစ်ဝိုက် လည်ပတ်ခြင်း အစရှိသည့် မိမိကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်ရသော ပါဝင်လှုပ်ရှားမှုများကို တက်ကြွ စွာ ပါဝင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ခရီးသွားဧည့်သည်များအနေဖြင့် ထိုကျွန်းများပေါ်မှ ကြည့်ရှုခံစား ရသော နေဝင်ဆည်းဆာ ပန်းချီကားသည် ကြည့်ရှုခံစားရသူတိုင်းအတွက် ဘဝ၏ အမှတ်တရတစ်ခု အဖြစ် ကျန်ရှိမည့်ရသအား ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Dawei isacity witharich history which dates back to the 11th Century when it wasapart of the Pagan Empire. It wasapart of the Sukhothai Kingdom and its successor the Ayutthaya Kingdom (Siam) from the 13th to the 16th century. Since then, the city was taken over by Siam and Burma time and again till the British took it over around 1824-1826. Under British rule, Dawei was known as Tavoy. After independence in 1948, Tavoy becameapart of the Tenasserim Division which also included the current Mon State. In 1974, the Mon State became an independent state and Tavoy became the capital of Tenasserim. In 1989, the city’s name was changed to Dawei from Tavoy and the state’s name changed to Tanintharyi. Old parts of Dawei still host buildings which stand evidence to this rich history, something which every traveller to Dawei needs to explore.
Dawei is home to some of the most beautiful pagodas of the region. The most notable among them is the Shin Motehti Pagoda located to the south of the town, the Shin Datweh Pagoda located to the north and the Shin Maw Pagoda located on the promontory. The Lawka Tharaphu Pagoda featuringa74-metre long statue of the reclining Buddha remains one of the most popular tourist destinations of the city. Each of these pagodas is unique in their own way and are not onlyaplace for worship but of immense cultural and historical importance. The Myaw Yit Paya located near the Maung Magan Beach is another popular tourist destination. This pagoda is located in the centre of the island and has been built by assembling huge rocks –amust visit place for any tourist.
Beingabeach town, Dawei is home to breathtakingly beautiful beaches which are also popular tourist destinations. One of the most popular places is Maungmakan Beach,aclean and serene place to relax and unwind. One can gorge on fresh seafood at the various restaurants and cafes located at this beach. Sat Sar Aww, Phoe-Phoe Kyauk and Sin tauk are other beaches which are worthavisit. Dawei also has amazing islands close by. Loung lone boke island and Pae Zin island on the Andaman sea remain the most visited islands around Dawei. Tourists can engage in activities such as snorkelling, fishing and boat trip in these islands. The picturesque sunset from these islands is something that one will rememberalifetime.
ထားဝယ်မြို့၏ ကြည်ညိုဖွယ်ရာ ဘုရားတစ်ဆူဖြစ်သော ရှင်မုထီဘုရားသည် ထားဝယ်မြို့သို့ လာရောက်လည်ပတ်ကြသော ခရီးသွားဧည့်သည်များအတွက် မဖြစ်မနေ လည်ပတ်ဖူးမျှော်သင့် သည့် နေရာဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထိုဘုရားအား လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၆၀၀) က တည်ထား ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်ဟု ဒေသခံများက ယုံကြည်သက်ဝင်ကြပြီး ယနေ့အချိန်ထိ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါရှင်မုထီဘုရားသည် ထားဝယ်မြို့၏ တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ အနည်းငယ် အကွာတွင် တည်ထားပါသည်။
ရွှေသာလျောင်းတော်မှုဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးသည် ထားဝယ်မြို့၏အစွန်၊ ကမ်းနားဈေးမှ (၅)ကီလိုမီတာအကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ ထိုရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးအား ၁၉၃၁ ခုနှစ်က တည်ထား ခဲ့ပြီး ထိုရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီး၏အလျားမှာ (၇၄)မီတာ ရှည်လျားပြီး ဉာဏ်တော်မှာ (၂၁)မီတာ မြင့်မားပါသည်။ ၎င်းရွှေသာလျောင်းတော်မှုဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးသည် ထားဝယ်မြို့၏ ထင်ရှား ကျော်ကြားသော ခရီးသွားဆွဲဆောင်သည့် နေရာဒေသများမှ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
မောင်းမကန်ကမ်းခြေသည် ကမ်းခြေ၏တစ်ဖက်တွင် တောင်တန်းကြီးများနှင့် တစ်ဖက်တွင် ပင်လယ်တည်ရှိသော လှပရှုမောဖွယ်ကောင်းသော ကမ်းခြေဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မောင်းမကန် ကမ်းခြေသည် ထားဝယ်မြို့မှ (၁၉) ကီလိုမီတာအကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ မောင်းမကန်ကမ်းခြေသို့ လာရောက်လည်ပတ်ကြသည့် ခရီးသွားဧည့်သည်များသည် ကမ်းခြေမှ နာရီဝက်ခန့် လမ်းလျှောက် ကာ ကမ်းစပ်တွင် လှေငယ်လေးများကို မေးတင်ထားသည့် ချစ်စရာကောင်းသော တံငါရွာလေး များသို့ လာရောက် လည်ပတ်လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။